घुराइ बानी होइन, रोग – Non Resident Nepali Association KSA
काठमाडौ, वैशाख १० – सुत्दा घुर्ने बानी छ ? घुर्दाघुर्दै सास रोकिनाले आत्तिएर ब्युँझने गर्नुभएको छ ? राति बारम्बार निद्रा खलबलिन्छ ? निद्रामा बर्बराउनुहुन्छ ? उत्तर सकारात्मक छ भने एकपटक चिकित्सककहाँ गइहाल्नुस् । बढी घुर्नु आफैंमा एउटा रोग हो ।
‘घुर्दा सास बन्दसमेत हुन्छ, तर सास दस सेकेन्डभन्दा बढी रोकिनु असामान्य हो,’ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एन्ड स्लिप मेडिसिन कन्सलटेन्ट डा. रमेश चोखानी भन्छन्, ‘एक घन्टामा पाँचपटकभन्दा बढी समयसम्म सास रोकिने समस्या छ भने चिकित्सकीय सल्लाह आवश्यक
छ ।’ उनका अनुसार घुर्दा सास रोकिने समस्या देखिएकाहरूलाई मुटुको रोग, पक्षाघातको सम्भावना धेरै हुन्छ ।
घुराइ श्वास-प्रश्वासका बेला सास रोकिने संकेत हुन सक्ने भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा भने लिनु हँुदैन ।
‘घुरिरहेका व्यक्तिलाई गहिरो निद्रामा रहेको ठानिन्छ,’ डा. चोखानी भन्छन्, ‘तर घुर्नु राम्रो स्वास्थ्यको सूचक होइन ।’
घुर्ने बानी लागेकाहरूले राति राम्ररी निदाउन सक्तैनन््, फलस्वरूप उनीहरू दिनभरि सुस्त देखिन्छन् । हाल सास रोकिने समस्याको उपचार गराइरहेका काठमाडौंका एक व्यवसायी दुईपटक ब्यांकको चेकमा हस्ताक्षर गर्दागर्दै निदाएका थिए । घुराइका कारण निद्रामा अवरोधले गर्दा व्यक्तिको एकाग्रता भंग हुन्छ । यसले कार्यकुशलतामा नराम्रो प्रभाव पर्छ ।
तीव्र स्वरले घुर्ने र निद्रामा सास रोकिने रोग धेरैजसो मोटा व्यक्तिलाई हुन्छ । १७ इन्च वा त्योभन्दा मोटो गर्दन भएका घाँटी भएका पुरुष र १५ इन्च मोटो घाँटी भएका महिलामा यस्तो समस्या पाउने गरिन्छ । केही व्यक्तिमा भने यो रोगको कारणै पत्ता लगाउन सकिँदैन । बालबालिकामा भने टन्सिल बढ्नाले सामान्यतः यो रोग
लाग्छ । तीस वर्षभन्दा माथिको दुईदेखि चार प्रतिशत जनसंख्यामा घुर्ने समस्या पाउने गरिएको डा. चोखानी बताउँछन् ।
रोगी बढी घुर्दैन भने उसलाई शरीरको तौल अलि कम गर्न सल्लाह दिइन्छ । साँझ रक्सी वा चुरोट नखान, नाक सम्भव भएसम्म सफा राख्न, कोल्टो सुत्न प्रेरित गरिन्छ ।
चिकित्सकले पहिले विभिन्न परीक्षणद्वारा घुर्ने कारण पत्ता लगाउँछन् । नाकमा मासु पलाउनु, नाकको पर्दा बांगो हुनु घुराइको कारण भए शल्यक्रियाको सुझाव समेत
‘सास अवरोध हुनेहरूले यो मेसिन उपयोग गरेपछि तिनको रक्तचाप सामान्य हुन्छ, मुटुको चाल सामान्य हुन्छ, निद्रा मजाले लाग्न थाल्छ,’ डा. चोखानी भन्छन्, ‘यसपछि रोगीहरू आफूलाई युवा र इनर्जेटिक अनुभव गर्छन्, सास रोकिनाले हुने समस्याबाट जोगिन